The New ABC's Retail: Na-ejikọta Mgbe niile | Martech Zone
New ABC's Retail: Na-ejikọta mgbe niile
Ndị na-ere brik na ngwa agha ka na-eme ka ịzụta ọtụtụ ike ha na - echekwa - ọ gaghị apụ n'oge ọ bụla. Mana omume na-agbanwe, na-achọ atụmatụ azụmaahịa dị n'ime ụlọ ahịa iji wulite mmekọrịta na ahụmịhe ka mma na ndị ahịa ha iji hụ na ha na-alaghachi.
Ihe omuma ihe omuma a site na DirectBuy bu ihe nlere anya banyere nsogbu ha, otu omume ndi ahia si agbanwe, na uzo ohuru ha na etinye. Ikekwe ọkacha mmasị m bụ ABC ọhụrụ ha… ọ bụghị Na-emechi Mgbe Niile, ọ bụ Na-ejikọta mgbe niile!
Usoro isi ire ahịa siri ike na-ada n'akụkụ ụzọ iji kwado ndị enyi na ndị enyi, mmekọrịta mmekọrịta. Anyị na-etinye ego na uru nke uru ọfụma ka ndị otu wee nwee ike nweta ọnụ ahịa na ọrụ kacha mma na-ahapụghị ụlọ. DirectBuy
Onlinezụ ahịa n'ịntanetị anaghị enye naanị mma, ọ na-enye ọtụtụ uru ndị ọzọ:
Na-echekwa Awa - Ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa oge ọ bụla ha chọrọ n'ịntanetị.
Ụgwọ ọnụahịa - Asọmpi gafere Ntanetị na - ebufu ọnụ ahịa n’etiti ndị asọmpi.
Speed - Ọ dịghị nchere na ahịrị… ịzụ ahịa n'ịntanetị dị ngwa ngwa.
Onyinye - Nnweta, ụdị dị iche iche na nyocha niile dị n'ịntanetị.
Ndị mmadụ ka na-azụ ahịa n'ụlọ ahịa n'ihi ọtụtụ ebumnuche… ịhụ ma metụ ngwaahịa a, nkasi obi nke ụlọ ahịa ahụ, ekele ndị ọrụ ahụ, na eziokwu na ha nwere ike weghachite ihe ngwa ngwa. Dakọtara na mma nke online na a oké ahụmahụ na-ụlọ ahịa mma na-ere ahịa ’ikike iji nweta ihe okporo ụzọ na-ụlọ ahịa mgbe ụgbọala tọghatara online nakwa.
Nweghị ike ijikọ ahụmịhe ndị ahịa na nkata ma ọ bụ oku ekwentị na ohere mmadụ. Iwulite mmekọrịta kwesiri ịbụ ihe dị mkpa maka brik ọ bụla.
Tags: na-ejikọ mgbe niileiduziedu ọgbọịzụ ahịa ekwentịịzụ ahịa n'ịntanetịretailịzụ ahịa ahụmahụụlọ ahịa ahụmahụ
Julaị 12, 2016, elekere 10:57 nke ehihie
Daalụ maka ozi. Na omume m, m kwuru, na nzaghachi dị mma ma ọ bụ ọmarịcha ibe na facebook, nwere ike ime ka ndị mmadụ zụta smth. Ma echiche kachasị njọ bụ ịṅa ntị na SMM ma ọ bụ ecommerce na-eche banyere SEO.